Soosaarayaasha Oxygen Taxanaha Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda Oxygen ee Oxygen la kala diray
Mashiinka Oxygen-ka ee lagu kala diro internetka T4046
Mitirka oksijiin ee warshadaha ee internetka ayaa ah kormeeraha tayada biyaha ee internetka iyo aaladda xakamaynta ee leh microprocessor. Qalabka waxaa lagu qalabeeyaa dareemayaal oksijiin ah oo dhalaalaya. Mitirka oksijiinta ee internetka lagu kala diray ayaa ah mid heer sare ah oo caqli badan oo khadka tooska ah kula socda. Waxaa lagu qalabeyn karaa koronto si ay si otomaatig ah u gaaraan cabbir ballaaran oo ppm ah. Waa qalab gaar ah oo lagu ogaanayo waxa oksijiinta ku jira dareerayaasha ee warshadaha la xiriira bullaacadaha.
Quadrupole Shaxanka Samaynta Iskuduwaha Sawirka, Chlorophyll Sensor, Sensor-ka Electromagnetic, Waxqabadka TDS Sensor, Dareeraha Dareemida Isukeenista Daawaha Titanium, Feeraha Dareeraha Fududeeyaha,